Lasa « pompier » na mpamono afo fotsiny io mpitondra foibe io fa tsy manana soson-kevitra entina hiadiana sy hialana amin’izao sakantsakana misy izaon hoy izy ireo, hirosoana amin’ny fampandrosoana sy hamongorona ny tsy fandriampahalemana. Fa inona tokoa moa no maika amin’ny mpitondra ankehitriny ? Révison constitutionnelle no maika ary laharam-pahamehana ho azy ireo. Hanova inona amin’ny fiainam-pirenena anefa izany laharam-pahamehana hoan-dry zareo izany ? hoy ity antoko TIM any Toliara ity. Hambarao ny mpiara-belona fa tsy misy fampandrosoana azo antenaina amin’io resaka io sy ny fandriampahalemana azo antenaina ihany koa ? Isaorana aloha ny mpitandron’ny filaminana mitandro izany filaminanana izany eto an-tampontanànan’i Toliara (Félicitation). Ho sahirana ihany anefa izy ireo atsy ho atsy satria tsy manana vahaolana amin’ity resaka ity ny fiondrana foibe amin’izao fotoana izao fa mamono afo fotsiny araka ny voalaza tery ambony. Tao anatin’ny 15 andro izao dia jiolahy 10 no lavon’ny mpitandron’ny filaminana teto Toliara ka hanambara etoana, ho y ny TIM Faritra Atsimo Andrefana fa misy ny ezaka ataon’ny mpitandro ny filaminana miara-miasa amin’ny fokonolona la nahitana vokany na dia kely aza nefa tsy tokony hiandry ny fitondrana foibe izay mampiandry an’I Paoly hatrany amin’ity resaka ity.